Magazini - Sangano Rekunyorera repasi rose Sangano
Iyo IWCA ndiyo imba yesangano yemaviri majenareta ekunyora: Kunyora Center Chinyorwa uye Kuongorora kwevezera rako.
Chinyorwa Chekunyora Chinyorwa
Kunyora Center Chinyorwa anga ari iwo wekutanga kutsvagisa yemagazini enzvimbo yekunyora kubvira 1980. Iyo magazini inoburitswa kaviri pagore.
Meseji kubva kuvapepeti varipo, Pam Bromley, Kara Northway, Eliana Schonberg, uye mupepeti wenyaya dzemabhuku Steve Price:
Isu takazvipira kutsikisa yakasimba yekutsvagisa kwemasimba uye dzidziso yehunyanzvi inoenderana nenzvimbo dzekunyora. Uye zvakare, isu tinotsvaga kuvaka yakasimba nzvimbo yekutsvagisa yenzvimbo dzekunyora. Kusvikira izvozvi, isu takazvipira kune matatu akakosha maitiro. Ticha:
Ipa mhinduro inonzwisisika pazvinyorwa zvese, kusanganisira izvo zvatinosarudza kuramba.
Tigone kuzviita kuti tigone kuwanikwa uye kuwanikwe pamisangano yepasi rose yekunyora.
Batanidza zviitiko zvehunyanzvi zvekuvandudza zvine chekuita ne Chinyorwa Chekunyora Chinyorwa nenzvimbo yedu yekutsvaga.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezvejenali, kusanganisira maitiro ekuendesa chinyorwa kana ongororo kuti itariswe, ndapota enda ku WCJWebhusaiti: http://www.writingcenterjournal.org/.
WCJ inogona kuwedzerwa kune yako IWCA nhengo yepakeji.
WCJ inowanikwa yakazara zvinyorwa kubva JSTOR kubva 1980 (1.1) kubudikidza nenyaya ichangoburwa.
Dzimwe nzira dzekuwana WCJ inogona kuwanikwa pawebhusaiti: http://www.writingcenterjournal.org/find/
TPR iri yakazara online, yakavhurika-kuwana, multimodal uye mitauro yakawanda webhu zvinyorwa zvekusimudzira kudzidza neakapedza kudzidza, undergraduate, uye vechikoro chesekondari varapi uye vavanoshanda navo.
Taura nezve TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR pawebhu: http://thepeerreview-iwca.org
mupepeti: Nikki Caswell
Kuti uwane ruzivo nezve IWCA Tsamba, IWCA Kwidziridzo, Shanya pano. Kuti uwane ruzivo pamusoro pezvimwe zvinyorwa zvinotarisana nekunyora nzvimbo kudzidza, shanyira yedu resources peji.